मार्कअप | मार्फत तपाइँको ईमेलमा कसरी हस्ताक्षर थप्ने आईफोन समाचार
कसरी मार्कअपको साथ तपाईंको ईमेलमा हस्ताक्षर थप्न
आईओएस ले एप्पलको मोबाइल अपरेटिंग सिस्टममा थोरै विवरण ल्यायो। यी विवरणहरू मध्ये एउटा यस्तो चीज हो जुन हामी ओएस एक्समा लामो समयदेखि प्रयोग गर्दै आएका छौं, एउटा फंक्शन जसले हामीलाई छविहरू चिह्न लगाउँदछ जुन यस रूपमा चिनिन्छ। डायल गर्दै। मार्किंगको साथ हामी छविहरूमा केही नोटहरू बनाउन सक्दछौं जस्तै पाठ, आकृतिहरू वा, यस लेखको बारेमा के हो, एक हस्ताक्षर जोड्नुहोस्। यस ट्यूटोरियलमा हामी तपाइँलाई तपाइँको ईमेलको तस्विर मार्किंगका साथ कसरी हस्ताक्षर गर्ने सिकाउनेछौं।
मार्किंगले आईओएसमा यसको पहिलो संस्करणमा समस्या भनेको त्यो मात्र मेल अनुप्रयोगमा उपलब्ध हुन्छ, जब हामीलाई सबैभन्दा धेरै चासो लाग्ने थियो कि यो रिलको छवि सम्पादनबाट उपलब्ध थियो। यस्तो सम्भावना छ कि यो सम्भावना आईओएस १० मा आइपुग्छ (वा होईन), तर अहिले यो केवल मेलबाट फोटोहरू मार्क गर्न को लागी सेवा गर्दछ, यद्यपि पछि हामी तिनीहरूलाई रिलमा बचत गर्न सक्दछौं, तर यो धेरै कष्टकर काम हुनेछ र यो अनुप्रयोग को उपयोग गर्न को लागी राम्रो छ स्किच.
मार्कअपको साथ फोटो कसरी हस्ताक्षर गर्ने
हामी दुबै मार्किंग प्रयोग गर्न सक्दछौं हामीले प्राप्त गरेका फोटोहरूमा र हामी संलग्न गर्दा। हामी निम्न कार्य गर्दछौं:
हामी एउटा छविलाई छुन्छौं र समाउँछौं।
हामी मा खेले डायल गर्दै.
हामीले यसमा खेलेका थियौं हस्ताक्षर रेखाचित्र.
देखिने मेनूमा, हामी ट्याप गर्दछौं हस्ताक्षर थप्नुहोस् ("हस्ताक्षर थप्नुहोस् वा हटाउनुहोस्" यदि हामीसँग पहिल्यै छ भने)।
हामी साइन इन गर्छौं र खेल्दछौं OK। यो छविमा देखा पर्नेछ। नोट: आईफोन s एस मा दबाव परिवर्तनहरू मान्यता दिन्छ।
अन्तमा, हामी आकार (वैकल्पिक) परिवर्तन गर्छौं र यसलाई इच्छित क्षेत्रमा राख्छौं।
तपाईमले देख्न सक्नुहुनेछ, आईओएस D मा डायल गर्ने प्रयोग एकदम सरल छ। यसको बारेमा राम्रो कुरा यो हो कि तपाईं आकारहरू पनि बनाउन सक्नुहुनेछ र स्मार्ट प्रणालीले मार्किंगले हामीलाई आकार दिन्छ जुन हामी चाहानुहुन्छ (एर्रो, सर्कल, स्क्वायर ...) पूर्णतामा। नकारात्मक पक्ष भनेको मैले माथि भनें कि यो केवल एप्पलको पूर्वनिर्धारित मेल अनुप्रयोगमा मात्र उपलब्ध छ। यो केहि हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » कसरी मार्कअपको साथ तपाईंको ईमेलमा हस्ताक्षर थप्न
PAC-MAN 256 एप्पल टिभीबाट हाम्रो बैठक कोठामा आउँदछ
Sonos अब बीटा मा एप्पल संगीत समर्थन गर्दछ